Widelands lalao paikady amin'ny fotoana tena izy mitovy amin'ny The Settlers | Ubunlog
Widelands dia lalao paikady tena izy (ho an'ny tambajotra marobe na ho an'ny mpilalao tokana) mihazakazaka amin'ny sehatra maro (ao anatin'izany ny GNU / Linux, Windows ary macOS). am-boalohany dia aingam-panahy avy amin'ny lalao Settlers II malaza avy amin'ny Blue Byte Software.
Mampifangaro motera hitantanana foko isan-karazany sy rafi-toekarena samihafa. Izy io dia voahodidin'ny C ++ miaraka amin'ny tranomboky SDL ary nahazo alalana ambanin'ny GPL.
1 Momba ny Widelands
1.1 Momba ilay kinova vaovao
2 Ahoana ny fametrahana Widelands amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
2.1 Ahoana ny fanesorana ny Widelands amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Momba ny Widelands
Widelands dia lalao paikady izay manapaka foko kely iray izay manomboka amin'ny tranony lehibe fotsiny, karazana trano mimanda, izay itehirizanao ny loharanonao rehetra.
Nandritra ny lalao, tsy maintsy mampitombo ny firenenao ianao. Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny foko dia hanao ny anjarany mba hamokarana loharano bebe kokoa: hazo, sakafo, vy, volamena, sns.
Saingy tsy irery ianao eto amin'izao tontolo izao, ary hihaona amin'ireo foko hafa na ho ela na ho haingana. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ho sariaka sy hifanakalo varotra aminao. Na izany aza, raha te hitondra an'izao tontolo izao ianao dia tsy maintsy mampiofana miaramila ary miady.
Ny rafitry ny làlana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny toekareny: ny entana rehetra alaina sy karakarain'ny foko dia tsy maintsy entina amin'ny trano iray mankany amin'ny trano hafa. Ataon'ny mpiambina izany, ary mandehandeha eny amoron-dalana hatrany ireo mpiandry vavahady ireo. Anjaranao no manamboatra ny làlana mahomby indrindra.
Widelands dia manolotra maodely mpilalao tokana misy fanentanana samihafa; Ny fanentanana rehetra dia milaza ny tantaran'ny foko iray sy ny adiny eo amin'ny tontolon'ny Widelands! Na izany aza, azo atao ny milalao maromaro amin'ny Internet.
Momba ilay kinova vaovao
Andro vitsivitsy lasa izay Navoaka ny kinova Build 20-rc1, nanampy fanatsarana gameplay, iraka vaovao, fanatsarana sary ary maro hafa.
Ao amin'ny fanatsarana ny lalao sy ny traikefa amin'ny lalao ato amin'ity kinova vaovao ity no ahitantsika ireto manaraka ireto:
Foko Friesiana vaovao
toby vaovao hanangonana miaramila
ny ala / mpiambina misafidy tany tsara
ny scout dia manohana ny tranokalan'ny fahavalo
Ao amin'ny sari-tanin'ny fampielezan-kevitra sy ny scenario, nanampy ireto manaraka ireto:
Iraka vaovao roa ho an'ny fampielezan-kevitry ny emperora.
Iraka vaovao roa ho an'ny foko Frisian.
fandanjalanjana sy fanitsiana.
Foko 4, saha 4
Ao amin'ny fanatsarana ny sary sy ny interface:
fiasan'ny zoom vaovao
varavarankely vaovao momba ny sambo
varavarankely fananganana mampiseho entana sy mpiasa ao anaty fitaterana
Sary vaovao ao anaty menus ihany
fanatsarana ny antontan-taratasy amin'ny Internet
Kitendry fitetezana nohatsaraina
Hafatra fanazavana raha misy olana ny mpamily sary.
lalana enina vaovao
Ny vokatra vaovao sy ny fampifangaroana tsaratsara kokoa.
En fanatsarana ny tambajotra sy ny marobe.
Fahaizana manolo amin'ny mpilalao multiplayer tafasaraka AI
lua api extension
fahaizana manampy tranobe izay miavaka amin'ny scenario iray
fahaizana mampakatra sy mitahiry ny tatitra fandrosoana mandritra ny fampielezan-kevitra
Fahaizana mamerina mamerina ny ekipa amin'ny alàlan'ny Lua mandritra ny lalao.
Ahoana ny fametrahana Widelands amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana ity lalao ity amin'ny disto misy azy ireo dia afaka manao izany amin'ny fanarahana ireo torolalana zarainay aminao eto ambany.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ampio ny repository ny lalao (PPA) amin'ny rafitray. Ho an'ity dia tsy maintsy manokatra terminal isika (Ctrl + Alt + T) ary ao no ampiasainay ity baiko manaraka ity:
Vita izao dia hanavao ny lisitry ny tahiry izahay miaraka amin'ny:
Farany afaka mametraka ny lalao amin'ny rafitray amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity izahay:
Ary vonona miaraka amin'izany, afaka manomboka milalao an'ity lohateny ity amin'ny rafitray izahay.
Ahoana ny fanesorana ny Widelands amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Mba hanesorana ity lalao ity amin'ny rafitra, raha tsy izany no antenainao na noho ny antony tadiavinao.
Hanokatra terminal fotsiny ianao (Ctrl + Alt + T) ary ao no hanaovanao ireto baiko famafana manaraka ireto (repository, fampiharana ary manadio izay soritry ny fampiharana)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Widelands lalao paikady amin'ny fotoana tena izy mitovy amin'ny The Settlers
Snapraid safidy tsara ho an'ny backup data amin'ny kapila maro
Photoflow, fampiharana fanovana sary tsy manimba